Miyajima Insurance Ụlọ Ọrụ Ọrụ - Imewe Mmewe
Wenezdee 14 Eprel 2021
Ụlọ Ọrụ Ọrụ Ebumnuche nke oru a bụ "ijikọ ụlọ ọrụ na obodo" na-erite uru na gburugburu ebe obibi. Saịtị dị na ebe a na-ahụkarị obodo. Iji mezuo ya ọwara oghere a na-ahụ anya, nke na-aga site n'ọnụ ụzọ mbata ruo na njedebe nke oghere ọrụ. Uzo nke osisi uko ulo na oghere ojii nke etinyere n’oku na ebe ndozi ikuku na-ekwusi ike n’obodo ahu.
Aha oru ngo : Miyajima Insurance , Aha ndị na-emepụta ya : Shinya Nomiyama, Aha onye ahịa : Miyajima Insurance Service.
Mọnde 12 Eprel 2021
Ụlọ Ọrụ Ọrụ Shinya Nomiyama Miyajima Insurance